ကော်ဖီက ဘယ်သူတွေနဲ့သင့်တော်သလဲ? တစ်နေ့ဘယ်နှစ်ကြိမ် သောက်သင့်လဲ?
လူတိုင်းနီးပါး ကော်ဖီ ကိုနှစ်ခြိုက်စွာ သောက်သုံးတတ်ကြပါတယ်။ နံနက်ခင်းတွေကို ကော်ဖီနဲ့ကြိုဆိုတတ်ကြသလို၊ နေ့ခင်းနဲ့ညတွေကိုလည်း ကော်ဖီနဲ့ပဲကုန်ဆုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလူတိုင်း နှစ်သက်စွဲလမ်းစွာသောက်သုံးတတ်ကြတဲ့ ကော်ဖီက ကဖိန်းဒြပ်တွေအပြည့်အဝ ပါဝင်ပါတယ်။ ကဖိန်းဓာတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေပေးနိုင်ပါသလဲ။
အားကစားသမားတွေ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေသူတွေဟာ ကော်ဖီကိုပိုမိုသောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ကော်ဖီမှာပါဝင်တဲ့ ကဖိန်းဓာတ်ဟာ အာရုံကြောတွေကိုနိုးကြားတက်ကြွစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
ကော်ဖီကို နံနက်တစ်ကြိမ်နဲ့ နေ့ခင်းတစ်ကြိမ်သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ နံနက်ခင်းအိပ်ယာထချိန်မှာ လန်းဆန်းတက်ကြွဖို့အတွက် ကဖိန်းဓာတ် လိုအပ်ပါတယ်။ တနေကုန်အလုပ်ပင်ပန်းပြီး နေ့ခင်းချိန်တွေမှာ ငိုက်မြည်းတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုထိုင်းမှိုင်းမှုတွေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ နေ့ခင်းပိုင်းမှာလည်း ကော်ဖီသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ကော်ဖီဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးတွေပေးနေပေမယ့် အလွန်အကျွံတော့မသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးအချိန်တွေမှာ ကော်ဖီကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ကော်ဖီမှာပါဝင်တဲ့ ကဖိန်းဓာတ်ဟာ သင့်အိပ်စက်ချိန်တွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်လို့ပါပဲ။